Global Voices teny Malagasy » Sodàna: Ireo Heloka Bevavan’ny Ady ao Darfour, Ny USS Cole, Taovolo Iray Lamaody Ary Mbola Betsaka Koa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2017 3:58 GMT 1	 · Mpanoratra SudaneseDrima Nandika (fr) i Claire Ulrich, miora
Sokajy: Afrika Mainty, Sodàna, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Tena navitrika ny tontolon'ny blaogy sodanezy nandritra ny herinandro telo farany. Atombontsika amin'ny filazana iray an'ny Fitsarana Iraisam-pirenena , izay namoaka ny anaran'ireo olona roa voarohirohy mikasika ireo heloka bevava tao Darfour .
Miaiky ny hagagany teo ampijerena ny sarin'ny iray amin'ireo voarohirohy ny mpanao blaogy The Sudanese Thinker [en]
« Ahmed Mohamed Haround dia iray amin'ireo olona roa voarohirohin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho toy ny mpanao heloka bevava an'ady tao Darfour. Sambany aho androany vao mba nahita ny sariny. [Sary Sudan Tribune ]
.”Arabo ve no fahitànao azy? Tsy amiko aloha. Ny marina, manana endrika olona avy ao Darfour izy. Nefa tena izay ve? Raha eny, midika izay fa na izy afro-arabo na afrikana valovotaka arabo. Ny fanamafisana fa, “Darfour dia fandripahana diso nataon'ireo arabo niady tamin'ireo afrikana”, dia fanatsotsorana tafahoatra mikasika izay tena nitranga marina. Mino aho fa ny sary eo ambony dia anisany porofo iray fanampiny”.
Gaga ihany koa izy tamin'ny firoboroboana vao haingana ifampidimpidiran'ny ao Sodàna, Shina, Amerika ary ny CIA.
“Marary ny an-dohako! Misy zavatra tsy dia mety loatra eto, ary miezaka ny hahazo izay mitranga aho:
1) Ny fanapahankevitr'i Shina , izay mandràra ny fitsidihan'i Hu Jintao tao Sodàna
2) Ny “Drafitra B” amerikana (sy ny politikany hamaizana an'i Sodàna ) izay manohitra ny vaovao milaza fa eo andalam-panorenana ny ivontoerany tena manandanja ao Afrika Atsinanana ao Sodàna ny CIA, ary koa mifanohitra amin'ny fiarahamiasa misy eo amin'ireo sampan-draharaha miafina sodanezy sy ny CIA (endri-javatra iray tsy resahan'ireo media amerikana loatra na tena tsy misy mihitsy)”.
Manambara i Black Kush [En] fa mpiasam-panjakana roa avy any sodàna atsimo no voasambotra noho ny kolikoly .
.”Fanapahankevitra iray feno fahasahiana  avy amin'ny governemanta Sodàna-Atsimo manohitra ny kolikoly izany. Nanjary iray amin'ireo mpanankarena indrindra tao Khartoum i Martin Malwal nony taty aoriana ary nahatonga resabe tato ho ato ny harenany. Toa natao sorona ilay iraikalahy faharoa saingy mbola hisy loha hafa hianjera. Fotoany ihany koa izao, na izany aza.”
Sarihany ihany koa ny saina ho amin'ny fihaonan'ny filoha lefitr'i Sodàna, Salva Kiir, tamin'ireo mpikomy tao Darfour .
“Farany, miezaka mitàna ny andraikiny mikasika ny krizin'i Darfour ny filoha lefitra Salava Kiir . Tsy azo ekena ny fihetsika tsy misy fandalàna ataon'ny antoko SPLM [Hetsi-bahoaka ho fanafahana an'i Sodàna]. Ao amin'ny governemanta no mitoetra ny antokony ary azo antoka fa ho voatsikera ihany koa. Manantena isika fa hitondra vokatra ireo ezaka ataony.”
Nandritra izany fotoana izany, tezitra tamin'ny fitsaràna natao tao Sodàna tamin'ireo fianakavian'ireo tradozan'ny fipoahan'ny USS Cole  i Hipster .
“Ankehitriny, azoko antoka 100% fa nataon'i Etazonia lasibatra ny fireneko. Hatramin'ny nilazàna fa tsy nahomby ny tetikadin'i Darfour, mampiasa hevitra hafa izy ireo mba hangejana ny governemanta. Nahoana i Etazonia no tsy mandoa ireo onitra sy ireo tombontsoa mikasika ny daroka baomba tamin'ny orinasa Al Shifa , tamin'ny taona 1998? Hitan'ireo masoko tsara ny balafomanga namakivaky ny habakabaka!”
Nomadic Thoughts ihany koa maneho ny hatezerany, saingy noho ny antony iray hafa. Ity vaovao manaraka ity no tena maha-romotra azy.
GUJRANWALA, PAKISTAN – Ny fanokanan-tena ho an'ny vahoaka dia fanomezan'Andriamanitra ho an'i Zille Huma Usman, minisitra provainsialy misahana ireo raharaha sosialy ao Punjab. Saingy herinandro roa izay, naneho ny tsy fanekeny i Muhammad Sarwar, izay nitondra ho amin'ny famonoany ilay ministra teny imasom-bahoaka nandritra ny famoriam-bahoaka iray satria, hoy izy nanazava, tsy mamela ireo vehivavy hiasa Andriamanitra. Nilaza tamin'ny mpitandro filaminana izy taty aoriana kely fa tsy nanenina velively mikasika ny heloka bevava nataony.
Toy izao no nosoratany:
“Ny mamaky ireo zavadoza toy io no tena maha-tezitra ahy. Iza avy ireo kaondrana mandehandeha sady milaza fa mantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ireo? Hita ho marary saina ireny olona ireny ary dia mbola manana fahasahiana koa manamafy fa Silamo izy ireo!”
Ary mba hamaranana azy aminà fanamarihana iray mahafinaritra kokoa, ity ny sarin'ny mpikambana iray ao amin'ny foko sodanezy Umm Bororo, miaraka amina taovolo tsy mahazatra!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/29/109305/
 Fitsarana Iraisam-pirenena: http://www.icc-cpi.int/home.html&l=fr
 ny anaran'ireo olona roa voarohirohy mikasika ireo heloka bevava tao Darfour: http://en.wikipedia.org/wiki/Cases_before_the_International_Criminal_Court#Darfur.2C_Sudan
 The Sudanese Thinker : http://www.amirahmadnasr.com/my-islam-book/
 politikany hamaizana an'i Sodàna: http://www.sudantribune.com/spip.php?article20770
 fa mpiasam-panjakana roa avy any sodàna atsimo no voasambotra noho ny kolikoly: http://bloggingjuba.blogspot.com/2007/03/two-south-sudan-officials-arrested-on.html
 Fanapahankevitra iray feno fahasahiana: http://www.sudantribune.com/spip.php?article20715
 ho amin'ny fihaonan'ny filoha lefitr'i Sodàna, Salva Kiir, tamin'ireo mpikomy tao Darfour: http://bloggingjuba.blogspot.com/2007/03/vp-salva-kiir-to-meet-darfur-rebels.html
 filoha lefitra Salava Kiir: http://www.sudantribune.com/spip.php?article20824
 fipoahan'ny USS Cole: http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cole_bombing
 Al Shifa: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shifa_pharmaceutical_factory